Udayisa amakota ukuze ayofunda owaKwaMashu
UQHAMUKE nebhizinisi lamakota ngakubo uNksz Thembi Zondi, lamakota asethathe abantu abaningi ngendlela enziwa ngayo Isithombe: SITHUNYELWE
Bongiwe Zuma | July 28, 2020
UKUBA nothando lokufunda kwenze intokazi yaseThekwini yavusa ibhizinisi elinganakekile elokishini langakubo ukuze ikwazi ukukhokha imali yesikole. UNksz Thembi Zondi (24) wakwaK KwaMashu owenza iForensic Investigation e-Unisa, uvule ibhizinisi lamakota esimanje okuyinto ejwayelekile kwezinye izifundazwe. UNksz Zondi ohlala nomkhulu, odadewabo ababili nomfowabo, uthe wathola umqondo waleli bhizinisi evakashele koninalume eGoli.
“Ngafika ngabona indlela amakota athengwa ngayo eGoli ngabona ukuthi ngasekhaya awekho mhlawumbe kungaba yibhizinisi elehlukile.
“Ngaqala ngenza ucwaningo lokuthi yenziwa kanjani ikota, ngabheka ukuthi ngingawenza kanjani awami ahluke. Ngithe ngisanda kuqala ibhizinisi kwavele kwafika iCovid-19 kwadingeka ngime ukudayisa,” kusho uNksz Zondi.
Lokhu akuzange kumthene amandla waqhubeka netoho alibambe kwesinye sezitolo eGateway ngenhloso yokuhlanganisa imali yokulikhulisa uma libuya.
“Angisenzi amakota kuphela, kukhona nezinye izinhlobo zokudla abantu abahlala bezidinga ngokushesha.
“Ishwarma, ama-burger nekota yikhona okuthengwa kakhulu. Umphakathi uyangeseka ngoba noma ngingekho ngisetohweni bayafika bezothenga,” kusho uNksz Zondi.
Ephetha uthe usefake nomfowabo omncane uNjabulo Zondi (22) osala abambe ibhizinisi uma esebenza yena. Into eseyinkinga wukuthola imishini esheshayo angakwazi ukwenza ngayo isikalo sokudla okuzonela okungenani abantu abangaphezulu kwababili ngesikhathi.
“Asisenabo abazali ngabe bayasixhasa noma ngomshini omncane, ngingajabula uma kukhona lapho esingathola khona uxhaso ngoba abantu bagcina sebelinda isikhathi eside. Angifisi badube ngoba ngizolahlekelwa amakhasimende ekubeni ngifunda ngayo imali yokudayisa,” kusho uNksz Zondi.